Guddiga PVC ee 10mm la ballaariyay
Looxa balaastigga ah ee 10mm ee PVC ayaa sidoo kale loo yaqaannaa guddigii xumbo PVC oo caddaan ah iyo alaabtii guddiga xumbo ee PVC, mid ka mid ah guddiga xumbo PVC ama xaashida xumbo PVC. Boodhka xumbo ee PVC Celuka waa nooc cusub oo ah kiimiko dhisme kiimiko ah oo leh qaab dhismeed unug isku mid ah oo ay samaysay PVC (polyvinyl chloride) cusbi sida alaabta ceeriin ee ugu weyn, waxyaabaha lagu daro kiimikada, iyo khadka wax-soo-saarka extrusion micro-foaming.
Xaashida xumbo PVC oo la balaariyay
Boodhka xumbada ee PVC oo la ballaadhiyey waa xaashi PVC ah oo khafiif ah, oo loo adeegsado dalabyo kala duwan oo ay ku jiraan calaamado iyo bandhigyo, soo bandhigid waabab, dhajinta sawirrada, naqshadda gudaha, heer -kululaynta, tusaalooyinka, samaynta moodalka, iyo waxyaabo kaloo badan. Waxaa si sahlan loo miirin karaa, loo shaabadeyn karaa, loo feeri karaa, loo dhiman karaa, loo ciidi karaa, loo qodi karaa, loo qori karaa, loo qodbi karaa, loo jeexi karaa ama loo xiri karaa iyadoo la isticmaalayo dhejisyada PVC.
Xaashida Forex 10mm
15mm Xaashida Forex waa cad, xoogaa yar oo la ballaariyey xaashida xaashida ah ee PVC oo leh qaab dhismeed unug oo gaar ah oo isku mid ah iyo sagxado xariir ah. Xaashida Forex waxay leedahay sifooyinka farsamada ugu fiican iyo tayada dusha sare ee ugu sareysa. Ganaaxa, xiran, qaab dhismeedka unugyada isku midka ah iyo dusha sare ee gogosha xariifka ah ayaa ka dhigaya xaashida guddiga pvc shey ku habboon tayada sare, codsiyada gudaha iyo dibedda ee muddada dheer.
10mm PVC guddiga xumbo celuka
10mm pvc celuka xumbo ayaa si weyn loogu isticmaalaa Warshadaha Alaabta, Warshadaha Xayeysiinta iyo Codsiyada Gudaha & Dibedda. Guddiyadan cusub ee looxyada xumbo ee PVC waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo culeys khafiif ah oo loo yaqaan 'PVC xumbo' kaas oo sidoo kale ah badeecad-saaxiibtinimo leh oo ah Dab-damiyaha, Caddaynta Biyaha & Moister, Caddaynta Termite & Cayayaanka, Daxalka & Iska-caabbinta Kiimikada.
guddi Sintra PVC oo tayo sare leh
Loox ka kooban caag ka samaysan alwaax waa nooc cusub oo ah walxo isku jira oo sanadihii ugu dambeeyay laga soo saaray gudaha iyo dibaddaba
In ka badan 35% - 70% burka alwaaxda, buunshaha bariiska, cawska iyo xarkaha kale ee qashinka ayaa lagu daraa alaab alwaax cusub ah, ka dibna waa la soo saaray, la shubay, la duray oo la farsameeyay iyo farsamooyin kale oo caag ah oo wax lagu farsameeyo ayaa loo adeegsadaa in lagu soo saaro taarikada ama astaamaha. Inta badan loo isticmaalo qalabka dhismaha, alaabta guriga, baakadaha saadka iyo warshadaha kale. Waxaa la yiraahdaa loox ka samaysan alwaax ka samaysan alwaax oo caaga iyo budada alwaaxda ah lagu qaso qaddar go'an ka dibna ay samaysmaan soo saarid kulul.
Guddiyada WPC si toos ah ayaa loo adeegsan karaa iyada oo ay ugu wacan tahay dhammaystirkeeda cajiibka ah & farsamooyinka adkeynta dusha sare marka la barbardhigo xitaa dusha sare ee laminate cadaadiska sare leh. Looxyada xumbo WPC si toos ah ayaa loo daabici karaa & UV ayaa lagu daboolay qurxinta dusha. Daaweynta UV ee dusha sare waxay bixisaa cimri dheereed marka la barbardhigo dusha sare ee HPL dahaarka leh ee looxyada, MDF & Walxaha.
Eco-saaxiibtinimo Looxa dahaarka leh ee xumbo PCV Waraaqaha caagga ah ee guddiga xumbo WPC ee armaajooyinka alaabta guriga
Xaashida Caagga ah ee WPC Sintra, oo sidoo kale loo yaqaan guddiga looxyada caaga ah ee Wooden, waa hal hal -abuur oo ka mid ah guddiga xumbo PVC. Guddiga xumbada WPC waxaa lagu soo saaraa xabagta PVC iyo budada alwaaxda oo lagu qaso saamiga qaarkood, oo lagu daray waxyaalo gaar ah oo lagu daray qaacido horumarsan, la xumeeyay oo laga saaray heerkul sare ugu dambayntii si loo sameeyo xaashi.
Shiinaha soo saaraha pvc alwaax xaashi caag ah wpc xumbo armaajooyinka musqusha jikada
Xaashida caaga ah ee PVC wpc xumbo loox loogu talagalay armaajooyinka musqusha ee jikada
Loox ka kooban caag ka samaysan alwaax waa nooc cusub oo ah walxo isku jira oo sanadihii ugu dambeeyay laga soo saaray gudaha iyo dibaddaba。
bunni PVC 5mm
Xaashida Brown PVC 5mm waa nooc ka mid ah guddiga xumbo WPC. Looxa-caagga ah waa nooc ka mid ah alwaax (cellulose alwaax, cellulose warshad) oo ah maaddada aasaasiga ah, maaddada polymer-ka kuleylka (balaastigga) iyo qalabka wax-qabadka, iwm, ka dibna si siman isku qas. Qalabka cagaaran ee tiknoolajiyadda sare leh iyo bay'adda u fiican alaabta qurxinta cusub ee ay samaysay kululaynta iyo soo-saaridda qalabka caaryada ayaa leh sifooyin iyo astaamo alwaax iyo caag ah. Waa nooc cusub oo ah walxo isku jira oo beddeli kara alwaax iyo caag.